Akụkọ Amra Beganovic na Martech Zone |
Edemede site na Amra Beganovic
Nwada Beganovich bụ CEO na onye nchoputa nke Amra & Elma's. Ọ bụ onye kacha nwee mmetụta nwere ihe karịrị nde 1 ndị na-eso ụzọ n'ofe ọwa ya. Akpọrọ ya aha dị ka onye ọkachamara n'ịre ahịa dijitalụ kachasị elu nke Forbes, Business Insider, Financial Times, Entrepreneur, Bloomberg, WSJ, ELLE Magazine, Marie Claire, Cosmopolitan, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ na-etolite ma na-ejikwa mgbasa ozi mgbasa ozi maka ụlọ ọrụ Fortune 500, gụnyere Johnson & Johnson, LVMH, Procter & Gamble, Uber, Nestle, HTC, na Huawei.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị mmadụ kwenyere na ahịa influencer bụ naanị maka nnukwu ụlọ ọrụ nwere nnukwu akụ, ọ nwere ike iju gị anya ịmara na ọ na-achọkarị mmefu ego. Ọtụtụ ụdị ejirila ọsụ ụzọ azụmaahịa influencer dị ka isi ihe na-akpata ihe ịga nke ọma e-azụmahịa ha, ụfọdụ emeela nke a na efu efu. Ndị na-emetụta ya nwere ikike dị ukwuu iji melite akara ụlọ ọrụ, ntụkwasị obi, mkpuchi mgbasa ozi, mgbasa ozi ọha na eze na-eso, nleta webụsaịtị, na ire ahịa. Ụfọdụ n'ime ha gụnyere ugbu a